Nhau - Akasiyana mashandiro emateki matanhatu akakosha
Mhando dzemashizha eti dzinogona kukamurwa muzvikamu zvitanhatu: nhema tii, green tea, chena tii, yero tii, oolong-tii uye nhema tii, zvinoenderana nezinga rekuvira. Matai akasiyana siyana ane akasiyana mabasa ehutano. Ngatitarisei pamabasa akasiyana ematai makuru matanhatu:
Taura mabasa akasiyana ematai makuru matanhatu
1. Green tii inoderedza moto
Green tii ine yakarebesa nhoroondo yekugadzira uye ine zvakapfuma zvikamu, senge Xihulong, Huangshan Maofeng, Dongting Bichun Luochun, Jingping Houkui zvichingodaro. Green tii rudzi rweiyo isina-kuviriswa tii. Iine kutaridzika kwakasiyana siyana uye yakasarudzika kuravira uye kuravira. Mashizha ndiyo chaiyo inozivikanwa tii uye inonyanya kutsvakirwa tii.
Catechin polyphenol macompound anoonekwa seakakosha ehutano-anobatsira zvinhu mu green tii, uye ane akasiyana siyana ehutano-ekuchengetedza mabasa, kusanganisira kugadzirisa moyo wemwoyo, uremu, uye electrode ionizing radiation. Matai mazhinji. Kubva pakuona kwemushonga wechiChinese, girini tii inotonhora uye inobatsira. Vanhu vane moto wakaderera uye kutonhora kwemudumbu vanofanira kunwa zvishoma, uye vanhu vane kupisa kwakaoma avo vanowanzo gumbuka uye vane muviri wakasimba vanofanirwa kuinwa.
Iyo tembiricha yemvura yakasvibirira tii iri 85 ℃. Iyo nguva iri nani 2 ~ 3 maminetsi. Iyo yakanaka chiyero chegirini tii kumvura iri1:50. Kune maseti tii, makapu epasireni kana makapu egirazi akajeka anogona kushandiswa, uye muvharo haufanire kuvharwa kana uchibika.
2. Nhema tii inodziisa dumbu uye inodzivirira moyo
Kune akasiyana akasiyana matii matema. Matema matema anowanzo kuve akapatsanurwa muzvikamu zvitatu: Gongfu nhema tii, Souchong nhema tii, uye yakaputswa nhema tii. Inotapira yakatsvuka uye yakajeka, nyoro yero mashizha, inopenya tsvuku uye zvichingodaro. Nhema tii inogadzira yakasarudzika mavambo uye copyright.
Theaflavins ndiwo mashandiro anoita tii mune tii. Huwandu hukuru hwezvidzidzo zvekurapa zvakaratidza kuti Honghong inobatsira mukugadzirisa zvirimo zvepasi-mapuroteni uye epamusoro-cholesterol mapuroteni mune tsinga dzevanhu, izvo zvinotungamira mukuzeza kwekudzora chirwere chemwoyo. Flavin zuva antioxidant, anti-cancer, kudzivirira kwechirwere chisingaperi uye kudzivirira. Tichitarisa kubva kumishumo yezvinyorwa zviripo, yakafanana nedzimwe tii, iyo chaiyo nhema tii ine yekutanga kuratidzwa kwechirwere chemoyo. Kubva pakuona kwechinyakare mushonga wechiChinese, dema tii inodziya mune zvakasikwa uye ine basa rekudziya dumbu.
Izvo zvakanaka kugadzira nhema tii nemvura ichangobikwa, huwandu hwemaminitsi hwakaenzana neiyo yegirini tii, uye yakanyanya nguva yekubika ndeye 3 ~ 5. Nzira yakanakisa yekugadzira tii nhema kushandisa kapu yegirazi. Iyo chaiyo nzira inogona kushandisa yepakati kukanda nzira. Kutanga, durura nezve 1/10 yemvura inopisa mumukombe, wobva wadira 3 ~ 5 gramu yetii, wozoisuka pamwe chete negirazi. Bubble. Gadzira nhema tii ine muvharo, iyo tii ichave yakawanda kofi.
3. White tii inorwisa mabhakitiriya uye anti-radiation
Iyo yekugadzirisa tekinoroji yeiyo chena tii iri nyore. Nekuda kwenzira yetii, iyo tii inova pekoe, mabhureki nemashizha madzinde, chimiro chiri chechisikigo, chakashongedzwa uye chakachena, sirivha chena, grey uye girini, uye muto wesobho wakareruka. Maitiro ekutora akasiyana. Inogona kugoverwa chena sirivheri tsono, chena peony, mutero tsiye uye hurefu hupenyu tsiye.
Iwo makemikari anoumbwa nechena tii anowanzo fananidzwa neyegirini tii. Kubva pane kumwe kuongorora kwehukama, chena tii ine zvirinani antibacterial mhedzisiro kupfuura mamwe ma teas. Uye zvakare, chena tii zvakare ine yakanaka yekurwisa-kuratidza maitiro. MuUnited States neEurope, machena machena tii anoshandiswa mukugadzira zvigadzirwa zvekurapa zvekuchengetedza ganda. White tii inotonhorera mune zvakasikwa uye inogona kudzikisa moto uye kuoma.
Iyo nzira yeiyo chena tii inowanzo fanika neiyo yegreen tii.
4. Tii yakasviba inodzivirira kutonhora uye inoderedza mafuta
Tea yakasarudzika tii chikamu ine nhoroondo refu uye dzakasiyana siyana dzakasiyana, senge Yunnan Pu'er tii, Hunan Fuzhuan tii, Guangxi Liucha, Hubei Qingzhuan tii uye Sichuan Biancha (Kangzhuan). Rima tii ndere tii yapamberi-yakaviriswa. Pasi pechiito chezvinhu zvese, iwo tii mashizha anoita kunge ari kuita asinganetsi makemikari maitiro kuti abudise zvimwe zvinobatsira zvikamu kumuviri wemunhu.
Pu'er tii uye Fuzhuan tii vamiriri vemhando dzakasiyana dzerima tii. Izvo zvine zvakasiyana zvinoshandiswa, asi zvazvakanakira zvakaramba. Panguva ino, kutsvagisa kuri kudzikira. Pu'er tii ine mabasa ekuderedza, kudzikisa ropa lipids, uye anti-hutachiona. Ndeapi ma statin makomputa anogona kuverengerwa mupfudzi-kudzikisa mhedzisiro; Fuzhuan tiyi zvakare ine yakanaka mhedzisiro yekudzora mafuta uye greasy. Iyo lipid-inoderedza mapuroteni basa yakafanana neayo mune nhema tii. Kune akawanda marudzi emacapsule, uye kune akawanda marudzi emamwe matii. . Iyo tii inodziya mune zvakasikwa, inobatsira kudzivirira iyo kutonhora, uye inokodzera vanhu vane isina kusimba uye inotonhora bumbiro. Rima tii iri nyore kunwa, uye iwe unogona kusarudza kushandisa hari yepepuru yevhu, yakanaka mukombe kana tureen yekubika.
5. Yero tii inokodzera munhu wese
Yai tii yakakamurwa kuita yeti tii (yakadai saAnhui Huoshan Yinzhen, Mengding Huangya naMogan Huangya), Huangxiaoya (senge Weishan Maojian, Beigang Maojian uye Pingyang Yellow Decoction) uye yeti tii (yakadai saAnhui Huoshan Huang Dacha) uye Guangdong). Huru hunhu hweyero tii yero shizha yero muto, yemapazi shizha pasi yero, muto tii yero, uye yakaoma tii zvakare inoonekwa yero uye inopenya, uye yakajeka uye inofadza, uye kuravira kwakakora uye kunozorodza.
Ikozvino, iko kutsvagisa nezve hutano hunobatsira yeyero tii haina kusimba. Inofananidzwa nerunako runozorodza rwegirini tii uye inodziya inonaka yeti nhema, iwo manakiro ehunhu yetii ari pakati, ayo angangoita akakodzera kune vanhuwo zvavo. Kazhinji yakafanana neyegirini tii.
6, Oolong tii moisturizing uremu
Oolong tii inozivikanwa zvakare seye green tii, uye iyo mellow kuravira kweFujian tii inouya pamwechete zvakare. Oolong tii inonyanyo kuve yakakamurwa muzvikamu zvina, zvinoti Maodzanyemba Oolong, North Fujian Oolong, Guangdong Oolong, uye Taiwan Oolong. Oolong tii ndeyechikamu cheiyi-yakaviriswa tii, pakati pekugadzira hunyanzvi uye hunyanzvi uye nhema tii.
Mamwe makatekini akajairika, tii polysaccharides, tii saponin, nezvimwewo mu green tii uye nhema tii, oolong tii ine yakakosha zvigadzirwa. Semuyenzaniso, "methylated catechins" mune mamwe oolong tii nzvimbo dzinorwisa-sema. Sekureva kwemamwe marondedzero anoenderana, oolong tii ine zvainoita zvirinani pakurasikirwa nehuremu pane mamwe ma teas. Kubva pakuona kwechinyakare mushonga wechiChinese, oolong tii ine hunhu hunodzikamisa uye inogona kubvisa yekare yakaunganidzwa kupisa. Inonyanya kukodzera maoko uye inogona kubvisa kuoma kwekudonha.
Zviri nani kushandisa hari yevhu yepepuru kana mukombe wakadhirowewa yekugadzira oolong tii, uye ive shuwa kushandisa irikufashaira mvura, uye vhara mushure mekubika.
Pamusoro pezvikamu zvitanhatu zviri pamusoro, kune mamwe ma tea akagadzirwazve, kureva kuti, tii inogadziriswazve pachishandiswa zvikamu zvitanhatu zviri pamusoro zvetii, zvakaita seti ine hwema, tii yekukasira, nezvimwe. Inonhuhwirira tii ndiyo inonyanya kugadzirwa green tii, yakadai senge yakasvibira tii tii uye nhema tii. Yakagadzirwa nemashizha etii uye kusanganisa kwemaruva uye kunhuhwirira kwetii, kuitira kuti igone kunhuwidza maruva uye iwane zita reti inonhuhwirira, senge "jasmine tii", "toy hawk tii", "pearl orchid tii" "," rima nhema tii " zvichingoenda zvakadaro.
Wakautangira Maokun Kunze uye Export Co, Ltd.ifekitori inosanganisa kutengesa, kugadzira, kutsvagisa nekusimudzira, ma teapoti uye tii. Inogona kupa inotsigira masevhisi tii uye tii rinovira;
Post nguva: Gumiguru-15-2021